အမေးအဖြေများ -, Ltd. Spieth (Xiamen) နည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်
ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့အနေနဲ့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောနိမ့်ဆုံးအမိန့်အရေအတွက်ရှိသည်ဖို့အားလုံးကိုနိုင်ငံတကာအမိန့်လိုအပ်သည်။ သငျသညျပြန်လည်ရောင်းချရန်ဖို့ရှာနေပေမယ့်အများကြီးသေးငယ်ပမာဏနေတယ်ဆိုရင်, ငါတို့သည်သင်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းရောက်ရှိဖို့ရန်သင့်အရေအတွက်တိုးမြှင့်အကြံပြုပါသည်။
အဆိုပါခဲအချိန်တာဝန်ခံနှင့်ကုန်တင်ကုန်ကျစရိတ်များအတွက်သာတာဝန်ခံအခမဲ့7အကြောင်းကိုရက်ပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါခဲအချိန် 20-30 ရက်အတွင်းသိုက်ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ထုတ်ကုန်အဘို့သင့်ကိုနောက်ဆုံးအတည်ပြုချက်ရတဲ့အခါ (1) ငါတို့သည်သင်တို့၏သိုက်ကိုလက်ခံရရှိကြနှင့် (2) ဦးဆောင်ကြိမ်ထိရောက်သောဖြစ်လာသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခဲအဆသင့်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်မထားဘူးဆိုရင်, သင့်ရောင်းချခြင်းနှင့်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုကူးပါ။ အားလုံးကိစ္စများတွင်ငါတို့သည်သင်တို့၏လိုအပ်ချက်များကိုလိုက်လျောညီထွေဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်ကျွန်တော်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့နိုင်ကြသည်။
သငျသညျ, L / C, T / T ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဏ်အကောင့်ဖို့ငွေပေးချေစေနိုင်သည်
ကျနော်တို့အာမခံကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိန်သိမ်းခြင်းနှင့်မလျော်ကန်သောလူ့စစ်ဆင်ရေးများအတွက် မှလွဲ. 5-နှစ်များအတွက်စင်လုပ်ရန်။
ဘယ်လိုထိန်သိမ်း install လုပ်နိုင်မည်နည်း
ကျနော်တို့ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းအမျိုးအစားတိုင်းအဘို့ညွှန်ကြားချက်ကို install အသေးစိတ်ပေး။ လိုအပ်ခဲ့လျှင်, ငါတို့သည်လည်းအခမဲ့အင်ဂျင်နီယာများဗီဒီယိုများသည်။
ဘယ်လိုအမြန် quotation အရနိုင်မလဲ?
အမြင့် * အနက် * တာရှည်: (2) Pallet အတိုင်းအတာထိန်သိမ်း?
တစ်ခုချင်းစီကိုအဆင့် (4) Loading စွမ်းရည်? (ဖြစ်နိုင်လျှင်, သင်ကြင်နာစွာသင့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာငါ့ကိုပြောပြနိုင်?)
(5) Ral အရောင်?
(6) ဘယ်နှစ်ယောက် bays (အစုံ)?
ဖုန်းနံပါတ်: +86 15259233328
Pallet ထိန်သိမ်း Protector , Pallet ထိန်သိမ်းဆက်စပ်ပစ္စည်း , ဂိုဒေါင် Pallet ထိန်သိမ်းစနစ် , foldable ဝါယာကြိုးကွက်ကွန်တိန်နာ , ဆွဲငင်အား Flow ထိန်သိမ်း , ဂိုဒေါင် Pallet သိမ်းတန်း ,